Dugsiga xannaanada iyo fasalka ardeyda lix sano jirka | Skolverket nyanlända
Waa maxay fasalka ardeyda lix sano jirka ah?
Dugsiga xannaanada iyo fasalka ardeyda lix sano jirka
Quseeyso canugaaga 1 ilaa 6 sano:
Waa maxay dugsiga xannaanada?
Dugsiga xannaanadu wuxuu aasaasi bilaawga waxbarashada, taasi oo socon doonta inta nolosha ka dhiman.
Canuga waa in la siiyaa xannaano oo tarbiyo waxbarasho leh. Dugsiga xannaanadu waa inuu ahaadaa mid leh farxad, kalsooni iyo waxbarasho badan, uu taasna siiyaa dhammaan carruurta meeshaas dhigata. Carruurtu waa in ay helaan fursad ay ayaga oo ciyaaraaya ay waxna bartaan, gacmahooda wax ku dhisaan oo ay ka wardoonaan – ayaga kaligood, koox ahaan iyo ayaga oo la suubinaayo dadka waaweeyn.
Dugsiga xannaanadu waa dugsi sidiisa gaar ah oo shaqadiisu ku salaysan tahay bixinta waxbarashada iyo dhigida waxbarashada. Waxbarashada waxa hoggaamiya macallimiinta dugsiyada xannaanada, laakiin waxa xitaa jooga shaqaale kale, si carruurta loo horumariyo oo ay wax u bartaan.
Shaqaalaha ayaa diyaarinaaya waxbarashada carruurta si ay carruurtu wax u abuuri karaan, u ciyaari karaan, wax u sawiri karaan, wax u dhisi karaan una heesi karaan. In lagu abuuro kalsooni carruurta iyo waalidkooda waa arrin muhiim ah inuu fuliyo dugsiga xannaanadu.
Yaa dhigta dugsiga xannaanada?
Dugsiga xannaanadu ma ahan qasab. Degmooyinku waa in ay ku martiqaadaan carruurta markey gaaraan 1 sano dugsiga xannaanada:
Markey waalidku shaqeynaayaan ama wax baranayaan.
Markey waalidku ay shaqo la’aan yihiin ama fasax waalidnimo ku jiraan.
Carruurta aanu waalidkoodu shaqeynin ama fasax waalidnimo ku jiraan waxa lagu martiqaadi meesha ugu yaraan 3 saacadood maalintiiba ama 15 saacadood toddobaadkiiba. Degmooyinka qaarkood saacado intan ka badan bey ku martiqaadaan.
Waa in degmooyinku ay xitaa ku martiqaadaan dugsiga xannaanada:
Dhammaan carruurta sanadka ay buuxinaayaan 3 sano (dugsiga xannaanada guud, oo ah 3 saac maalintiiba).
Carruurta caawinaada qaaska ah u baahan.
Dugsiyada xannaanadu waxey kala yihiin kuwo degmadu ay mas’uul ka tahay iyo kuwo ka madax bannaan. Dugsiyada xannaanada ee degmada ka madax bannaan waxa ka dambeyn kara urur waalideed ama urur shaqaale, hey’ad samafal ama shirkad.
Degmooyinka baa mas’uul ka ah in degmada laga heli karo dugsiyada xannaanada iyo in carruurta lagu martiqaado boos. Dugsiyada xannaanada ee madax bannaan waxa loogu talagalay in la heli karo wax looga baddalan karo kuwa ay degmadu mas’uulka ka tahay.
Waa degmooyinka waxa oggolaanshaha bixinayaa markii dugsiyada xannaanada madaxa bannaan la furaayo isla markaana degmada ayaa mas’uul ka ah koontaroolida dugsiyada in tayadoodu ay tahay mid wanaagsan oo la isku hubo. Dugsiyada xannaanada ee madaxa bannaan iyo dugsiyada xannaanada ee degmadu mas’uul ka tahay waxa qabanaya isku xeer.
Sharcigee lagu dhaqmaa dugsiga xannaanada?
Dugsiga xannaanada waxa maamula sharciga dugsiyada iyo manhajka waxbarashada.
Sharciga dugsiyada waxaa ku qoran:
Kooxda carruurta ah waa in tiradooda iyo habka la iskugu darayaaba uu ahaado mid suurtagal ah, oo carruurta loo suubiyaa deeggaan u wanaagsan.
Waa inuu meesha joogaa macallinka dugsiga xannaanadu, waxa kale oo jooga shaqaale kale oo tababaran, waxbarashadana gacan ka geysan kara.
Qolalka iyo qalabka waa in ay ahaadaan kuwo meesha loo keenay si uu dugsiga xannaanadu waajibkiisa uga soo bixi karo.
Dugsiga xannaanada guud waa bilaash saddex saacadood maalintiiba laga soo bilaabo dayrta sanadka uu canugu buuxinaayo saddex sano. Waa degmada ama dadka mas’uulka ka ah soo diyaarinta boosaska dugsiga xannaanada waxa go’aaminaayo inta qarashka booska dugsiga xannaanadu ahaanaayo. Sharciga dugsiyada waxa ku qoran qarashkaas waa inuu ahaado mid aqligal ah, inuu ilaa xad badnaan karo.
Maanta dhammaan degmooyinku waxay isticmaalaan Xadka sare. Xadka sare waxaa laga wadaa in la go’aamiyay inta ugu badan oo laga qaadi karo qoysaska kala duwan.